Otu esi emepụta kalenda nke gị na Okwu na ndebiri n'efu - Ntuziaka Nkuzi | Nzukọ Ekwentị
Otu esi emepụta kalenda gị na Okwu
Ụlọ Ignatius | | Okwu Microsoft, Autlọ ọrụ akpaaka
Ngwa kalenda nke dị na ekwentị mkpanaaka na kọmpụta bụ otu nke anyị kacha eji ede ndị niile anyị achọghị ka echefuru echefu ma na mgbe ụbọchị guzobere anyị, anyị na-enweta ọkwa. Na-enweghị ikwu maka kalenda ekekọrịtara, usoro kachasị mma nke mmadụ niile metụtara ya nwere ihe ọmụma banyere ihe omume, gafere kalenda na usoro nkịtị.
Anyị niile agaala ebe a na-ahụ maka igwe ebe anyị hụrụ ụmụ nwanyị nwere oke olu na kalenda ndị mara mma. Kalenda ndị a, nwere usoro DIN A3 dị mma maka oke ha iji mee nkọwa nke mmadụ niile na-ahụ. Otú ọ dị, ọ na-esiwanye ike ịchọta ha, nke na-amanye anyị mepụta kalenda nke anyị ma ọ bụrụ na anyị na-achọ kalenda buru ibu.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na anyị nwere ọtụtụ ngwa na ịntanetị nke na-enye anyị ohere ike kalenda ngwa ngwa na mfe, nhọrọ nhazi ahaghị oke. Maka nsogbu a, enwere ngwọta dị mfe karịa ka ị nwere ike ịtụ anya: Microsoft Word.
Okwu na-enye anyị ohere ike ụdị akwụkwọ ọ bụla, site na akwụkwọ mmado site na WordArt ruo fanye kalenda site na usoro okpokoro. Ekele maka tebụl, anyị nwere ike ịmepụta kalenda nke nha ọ bụla iji kwado mkpa anyị.
1 Nzọụkwụ iji mepụta kalenda na Okwu
1.1 Tọọ nha kalenda
1.2 Mepụta tebụl ga-anabata kalenda ahụ
2 Mepụta kalenda na Okwu site na ndebiri
Nzọụkwụ iji mepụta kalenda na Okwu
Tọọ nha kalenda
Kalenda dị nha folio dị mma iji dobe mgbidi ahụ ma nwee ụbọchị ụbọchị n'izu yana nkọwapụta nke anyị hibere. Agbanyeghị, n'ihi oke ya, anyị ga-ahụrịrị ya anya, yabụ ọ bụrụ na ebumnuche kalenda ahụ bụ na ọ nọ n'otu ebe a pụrụ ịhụ ya, oke nke a kwesiri ibu. Nha ahaziri maka akwụkwọ Okwu niile bụ A4.
Iji gbanwee oke akwụkwọ nke anyị ga-eke akwụkwọ ahụ, anyị ga-pịa nhọrọ ahụ Ego, nke di na ntinye aka elu, ma emesia n'ime Size. Ọ bụrụ na nha anyị na-achọ adịghị n'etiti nhọrọ ndabara egosipụtara, anyị ga-pịa Ọtụtụ akwụkwọ nha ma tọọ akụkụ anyị chọrọ aka.
Ọ bụrụ na nha kalenda guzobere abụghị A4, mgbe ibipụta akwụkwọ ahụ, anyị nwere ike ịme ya otutu mpempe akwụkwọ, idebe enweghị mbipụta akwụkwọ, wee sonyere ha. Ma ọ bụ, anyị nwere ike ịga ụlọ ahịa oyiri ka e bipụta ya nha anyị họrọla.
Mepụta tebụl ga-anabata kalenda ahụ
Nke mbu, ka anyi ghara ime mgbanwe na tebụl ndị emeelarị (ma si otú a zere njehie) ma mepụta kalenda na ọnwa niile nke afọ, anyị ga setịpụ peeji dị iche maka ọnwa nke afọ.
Ozugbo anyị mechara mepụta kalenda maka ọnwa mbụ, anyị pịa igodo Njikwa + Tinye, iji gaa ozugbo na ibe na-esote (ọ bụrụ na anyị pịa igodo Tinye iji mepụta ibe ọhụụ, mgbanwe ọ bụla anyị mere na kalenda ahụ ga-emetụta peeji ndị ọzọ). Ahịrị nke mbụ (abụghị ahịrị) kwesịrị igosi ọnwa kalenda.
Tebụl ga-ebu kalenda ga-agwakọta ya 7 kọlụm (nke kwekọrọ na ụbọchị izu) na 7 filas (6 kwekọrọ na ọnụọgụ kachasị karịa izu nke ọnwa nwere ike ịnwe na otu iji mepụta ụbọchị izu).
Iji mee nke a, anyị na-aga nhọrọ Fanye teepu ma pịa Isiokwu ahọpụta ọnụọgụ tebụl na ogidi ndị anyị chọrọ iji (7 × 7).
Ọzọ, tupu ịhazi tebụl, anyị ga-emerịrị ya tinye ụbọchị nke izu na ahịrị mbụ. Ọzọ, anyị ga-mejupụta mkpụrụ ndụ na ụbọchị nke izu kwekọrọ na ọnwa ọ bụla.
Ugbu a, anyị ga-etinye akwụkwọ Ọkpụkpọ na tebụl. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịhọrọ tebụl niile. Mgbe ahụ na teepu ahụ Imebe, pịa na ndabara usoro ndị Okwu na-eme ka anyị nwee ike ịhazi okpokoro anyị mepụtara.
Tupu ịhọrọ usoro kachasị amasị anyị, anyị ga-emerịrị uncheck akpa kọlụm igbe na lelee ikpeazụ kọlụm, nke mere na kọlụm kwekọrọ na Sọnde na ọ bụghị Monday gosipụtara shaded. Nhọrọ a dị n'akụkụ aka nri nke rịbọnụ Imewe.
Ọzọ, anyị ga- hichapụ ahịrị ndị anyị achọghị. Iji mee nke a, naanị anyị ga - ahọrọ ya wee pịa bọtịnụ aka nri wee họrọ Hichapụ na menu nhọrọ gosipụtara.
N'ikpeazụ, anyị ga- setịpụ elu anyị chọrọ iji rụọ ọrụ ụbọchị nke izu, inwe ike inye nkọwa, ma ọ bụrụ na ikpe ahụ amalite. Mfe ngwọta iji mee nke a bụ pịa Tinye na ụbọchị nke ọ bụla ka anyị na-ede ha. Ọzọ, ngwangwa ngwangwa bụ site na njirimara nke okpokoro.
Iji nweta akụrụngwa nke okpokoro, anyị na-ahọrọ ahịrị ebe ụbọchị gosipụtara, pịa bọtịnụ aka nri ma họrọ Njirimara tebụl.
Na-esote, pịa taabụ Ahịrị, anyị akara igbe Ezipụta elu, anyị setịpụrụ ogologo chọrọ na na nhọrọ Ahịrị Elu anyị họrọ nhọrọ Kpamkpam. N'ikpeazụ, anyị pịa nabata na nke a ga-abụ nsonaazụ.
Thelọ ala na-esote 31st bụ Satọde. Ka m wee ghara ịgbagwoju ya anya dị ka a ga-asị na ọ bụ ụbọchị ọzọ na kalenda, agbala m cell ahụ na otu agba dị ka sunday. Iji mejupụta sel ahụ nwere otu agba dị ka Sọnde, etinyewo m cursor na cell ahụ, m pịa bọtịnụ aka nri nke òké ahụ ma pịa ya na ite agba, na-esote ịhọrọ otu agba ahụ egosiri na kọlụm Sunday.
Mepụta kalenda na Okwu site na ndebiri
Ọ bụ ruo mgbe Office 2016 ka Microsoft nwetara ya n'ezie, mgbe ọ bịara inye ndebiri ụdị niile. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ngwa ọ bụla nke so na Office 365 na-enye anyị ọnụọgụ ole na ole, ndị a ha anaghị egbo mkpa ndị ọrụ niile.
Ihe ngwọta nye nsogbu a bụ ịmepụta ibe weebụ ebe ndị ọrụ nwere ike chọọ ma budata ndebiri n'efu. Ebe nrụọrụ weebụ a na-etinye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndebiri nkewa nke isiokwu na ebe mgbakwunye na ndebiri kalenda, anyị nwekwara ike ịchọta ndebiri maka akwụkwọ akụkọ, ndepụta, memos, menus, payroll, invoices, receipts, budgets, presentations ... so ruo edemede 35.
Ndebiri dịnụ dị maka Okwu, Excel ma ọ bụ PowerPoint na n'ọtụtụ n'ime ha, anyị na-ahụ macros nke na-enye anyị ohere gbanwee data ndebiri n'iji igbe ndaba ka anyi ghara iji aka gi gbanwee data egosiputara.
Maka kalenda na Okwu, na ole na ole clicks, anyị nwere ike ịnwe kalenda nke kwekọrọ na ọnwa ọ bụla kwadebere na-enweghị ike ịmepụta tebụl, dezie ha, jupụta mkpụrụ ndụ ...
Niile ndebiri, anyị nwere ike ịhazigharị ha ka ọ masịrị anyị, ma ọ bụrụhaala na anyị anaghị edezi ubi ndị metụtara macros. Macros na akwụkwọ Office nwere ike ịnwe nje, yabụ mgbe ọ bụla anyị mepere akwụkwọ n'ụdị a, ha nwere nkwarụ.
Dika ndebiri ndia sitere na Microsoft bịanyere aka na ya, enweghị nje, yabụ anyị anaghị etinye ihe egwu ọbụla na-enyere ha aka ma anyị mepee ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Otu esi emepụta kalenda gị na Okwu
Antivirus kacha mma maka Windows 10
Etu esi ejikọ PowerPoint na usoro dị mfe